Andriamanitra ihany no afaka mitsara ahy?
Tiako ny miresaka momba ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika, na dia rehefa misy olona tsy manaiky amiko momba izany. Resadresaka dia afaka mahazo ny tena henjana aza-tena haingana indrindra rehefa miresaka momba ny olana mampiady hevitra. It’s never fun...
Isaky ny mamoaka sary ny fianakaviako tao amin'ny media sosialy, ny valin-dia mahafinaritra foana. Ny mahazatra indrindra dia, "Ny zanakao dia tena tsara tarehy!"Na" Inona no tsara tarehy fianakaviana!” But one of the...
No lasa Kristianina hoe ny faran'ny ny mahafinaritra? Izany no fanontaniana mahaliana ary mihevitra aho fa ny tsara tarehiko mba hanontany. Misy sary anankiray Kristianisma izany matetika voaloko. When people...
Guest lahatsoratra avy any Jessica Barefield Mamelà ahy hanomboka amin'ny alalan'ny fanomezana ny Disclaimer. Ity lahatsoratra ity dia tsy mikasika ny haino aman-jery sosialy ny ratsy dia. Nampiasaina araka ny antonony, po tsara amin'ny fihetsika, it can be...
Inona no tsy hamono ahy
Rehefa mandeha ianao amin'ny alalan'ny fotoana mafy, foana ny olona tsy mahalala izay holazaina. Ny vokany dia dikany clichés na trite ezaka mampahery anao. I’ve always had a problem with cliché...
Rehetra izao, ary avy eo aho miresaka amin'ny olona iray izay milaza fa te ho tonga Kristianina, nefa toa mihevitra ny fotoana dia tsy tena marina. Raha manontany azy ireo hoe nahoana, they tell...